UFranklin Delano Roosevelt ukhokela i-US ngenye yexesha elibi kunayo yonke kwimbali yalo. Wafungelwa kwi-ofisi njengoko i- Depression Depression yayimisa ngokubanzi kwilizwe. Izigidi zabantu baseMerika baphulukana nemisebenzi yabo, amakhaya abo kunye nokugcinwa kwabo.
I-IDR entsha ye-FDR yayiyinkqutyana yeenkqubo zenkxaso-nkqubo ezazisungulwa ukuze zitshintshe ukuhla kwelizwe. Iiprogram ezintsha zoTshintsho zibuyisela abantu emsebenzini, zanceda iibhanki zakha kwakhona i-capital yabo, zabuyisela ilizwe kwimpilo yezoqoqosho. Nangona iiprogram ezininzi zeNew Deal zaphela njengoko ii-US zangena kwiMfazwe Yehlabathi II , bambalwa abasaphila.
I-Federal Deposit Insurance Corporation
I-FDIC iqinisekisa idiphozithi yasebhanki, ikhusela abathengi kwiingxaki zebhanki. I-Getty Images / Corbis Imbali / uJames Leynse
Phakathi kowe-1930 no-1933, iibhanki ezingama-9 000 zase-United States zawa. Ama-deposit aseMerika alahlekelwa i-dollar 1.3 yeebhiliyoni kwi-savings. Oku kwakungesihlandlo sokuqala abantu baseMelika belahlekelwe imali yabo ngexesha lokuhla kwezomnotho, kwaye ukuhluleka kwebhanki kwenzeka ngokuphindaphindiweyo kwi-19 leminyaka. UMongameli uRoosevelt wabona ithuba lokuphelisa ukungaqiniseki kwinkqubo yasebhanki yaseMelika, ngoko ke abafakeli-ntlawulo abayi kuba neelahleko elibi kwixesha elizayo.
UMthetho weBhanki ka-1933, owaziwa ngokuba yi- Glass-Steagall Act , olwahlula ibhanki yorhwebo kwibhanki yotyalo-mali, kwaye wawalawula ngokuhlukileyo. Umthetho uphinde wamisa i-Federal Deposit Insurance Corporation njengeziko elizimeleyo. I-FDIC ithuthukise ukuzithemba kwabathengi kwinkqubo yebhanki ngokuqinisekisa iifomethi kwiibhanki zamalungu e-Federal Reserve, isiqinisekiso esasinikezela ngamakhasimende asebhanki namhlanje. Ngomnyaka we-1934, iibhanki ezi-9 kuphela ze-FDIC-ze-insured zahluleka, kwaye akukho zifakelo kwiibhanki ezingaphumeleli ezilahlekelwe imali yazo.
I-inshurensi ye-FDIC ekuqaleni yayingagcinwa ukufaka i-$ 2,500. Namhlanje, ukufaka imali kwi-$ 250,000 ikhuselwe ngu-FDIC. Amabhanki ahlawula iipresimesi ze-inshorensi ukuqinisekisa ukuba idizithi zabathengi bazo.
I-Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)
Umbutho we-Federal National Mortgage Association, okanye uFannie Mae, yenye enye inkqubo yeNew Deal. Getty Images / Win McNamee / Abasebenzi
Kunjengeenkxalabo zemali zakutshanje, ukuhla kwezomnotho ngowe-1930 kwafika kwizithende zebhola leemakethe zezindlu. Ekuqaleni kolawulo lweRoosevelt, phantse isiqingatha se-mortgage yaseMelika yayingekho. Ukwakhiwa kokwakhiwa kwaye kwayeka, ukubeka abasebenzi kwimisebenzi yabo nokwandisa ukuwa kwezoqoqosho. Njengokuba iibhanki zahluleka ngamawaka, ababolekayo abafanelekile babengenakufumana iimboleko zokuthenga amakhaya.
I-Federal National Mortgage Association, eyaziwa nangokuthi nguFannie Mae , yasungulwa ngo-1938 xa uMongameli uRoosvelt watyikitya isichibiyelo kuMthetho weZindlu kaZwelonke (owadlulelwa ngo-1934). Injongo kaFannie Mae yayikuthenga iintengo zemali ezivela kubathengi bangebucala, ukukhulula imali eyinkunzi ukuze abo babolekisi bahlawule imali. UFannie Mae uncedise ukutshayela i-WWII yokuqhawula indlu ngokuxhasa imali yezigidigidi ze-GIs. Namhlanje, uFannie Mae kunye nenkqubo yomlingane, uFreddie Mac, zikarhulumente zikarhulumente eziphathekayo ezixhasa iimali zokuthenga ekhaya.
IBhodi yoBudlelwane beZwelonke
IBhodi yoBudlelwane beZebasebenzi kaZwelonke yomeleza imibutho yabasebenzi. Apha, abasebenzi bavotela ukuhlangana kwiTennessee. ISebe leMandla / uEd Westcott
Abasebenzi ekupheleni kwekhulu lama-20 babefumana i-steam kwimigudu yabo yokuphucula izimo zokusebenza. Ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi I , imibutho yabasebenzi yabhala amalungu angama-5 ezigidi. Kodwa ulawulo lwaqala ukukhwaza i-whip kwiminyaka ye-1920, isebenzisa izigwebo kunye nokugweba imiyalelo yokumisa abasebenzi ukuba bangabetha kwaye baququzelele. Ubulungu beManyano bunqamle kwiinombolo zangaphambili ze-WWI.
Ngomhla kaFebruwari 1935, uSeninkulu uRobert F. Wagner waseNew York wazisa uMthetho wezoBudlelwane beZwelonke, oza kudala i-arhente entsha ezimisele ukunyanzelisa amalungelo abasebenzi. IBhodi yoBudlelwane beZebasebenzi kaZwelonke yasungulwa xa i-FDR isayina isenzo sikaWagner ngoJulayi waloo nyaka. Nangona umthetho wawuqale umngeni kwi-shishini, iNkundla ePhakamileyo yase-United States yawulawula ukuba i-NLRB yayisiseko somgaqo-siseko ngo-1937.
IKomishoni yoTywala kunye noTshintshiso
I-SEC yenza ukuba kubekho ukuphazamiseka kwemakethe ye-1929 eyathumela i-US kwiminyaka elishumi yokudakumba kwexesha elide. Getty Izithombe / Chip Somodevilla / Abasebenzi
Emva kweMfazwe Yehlabathi I, kwakukho ukugqithiswa kwezobalo-mali kwiimarike ezithengiswayo ezingabhalwanga. Uqikelelo lwabahlalimali abayizigidi ezingama-20 batheba imali yabo kwiimfihlo, befuna ukuzityebi baze bafumane isiqwenga sawo sokuba yi-$ 50 yeebhiliyoni. Xa imarike yaphahlazeka ngo-Oktobha 1929, abo batyali-mali balahlekelwa yimali yabo kuphela, kodwa banethemba lokuthengisa.
Injongo ephambili ye-Securities Exchange Act ka-1934 yayikubuyisela ukuzithemba kwabathengi kwiimarike zokhuseleko. Umthetho usungula iKomishoni ye-Securities and Exchange ukulawula nokujongana neefayili zorhwebo, ukuthengiselana kwamasheya kunye namanye amanxusa. I-FDR iqeshwe nguJoseph P. Kennedy , ubaba wongameli wexesha elizayo, njengosihlalo wokuqala we-SEC.
I-SEC isekho, kwaye isebenza ukuqinisekisa ukuba "bonke abatyali-mali, ukuba ngaba amaziko amakhulu okanye abantu abazimeleyo ... banokufikelela kwiinyani ezithile eziphambili malunga notyalo-mali ngaphambi kokuba bathenge, kwaye kude nje bebambe."
Ukhuselo lwezeNtlalo luyaqhubeka luyinye yeenkqubo ezithandwayo kunye ezibalulekileyo zeNkqubo zokuThuthwa kweNtsha. Getty Izithombe / Moment / Douglas Sacha
Ngowe-1930, ii-6.6 yezigidi zaseMelika zazingama-65 ubudala nangaphezulu. Ukuthatha umhlala-phantsi bekuphantse kufane neentlupheko. Njengoko i-Depression Depression yabamba kwaye izinga lokungasebenzi liye landa, uMongameli Roosevelt kunye nabalingani bakhe kwiCongress baqaphela imfuno yokuseka uhlobo oluthile lokhuseleko lwabadala kunye nabakhubazekile. Ngomhla ka-Agasti 14, 1935, i-FDR isayine uMthetho woKhuseleko loLuntu, ukudala into echazwe njengenkqubo efanelekileyo yokunciphisa ubuhlwempu kwimbali yase-US.
Ngokweqendu loMthetho woKhuseleko loLuntu, urhulumente wase-United States wamisela i-arhente ukubhalisa abemi ukuba bafumane inzuzo, ukuqokelela irhafu kubaqeshi kunye nabasebenzi ukuxhaswa ngeenzuzo, nokusabalalisa loo mali kubaxhamli. Ukhuseleko lwezeNtlalo aluncedisi kuphela abantu abadala, kodwa nabangaboniyo, abangasebenzi nabantwana abaxhomekeke kuyo .
Ukhuseleko lwezeNtlalo lubonelela ngezigidi ezingama-60 zaseMerika namhlanje, kuquka nabangaphezu kwezigidi ezingama-43 eziphezulu. Nangona ezinye iindibano kwiCongress ziye zazama ukucwangcisa okanye ukuxhatshazwa koKhuseleko loLuntu kwiminyaka yamuva nje, ihlala enye yeenkqubo ezithandwa kakhulu kunye neNkqubo yokuThuthukiswa kweNtsha.
INkonzo yoLondolozo loMhlaba
Inkonzo yokuLondolozwa kweMhlaba isasebenza nanamhlanje, kodwa yabizwa kwakhona ngeNkonzo yoLondolozo lweMvelo ngo-1994. Isebe lezoLimo lase-US
I-US yayisele ixhomekeke kwiNgcoliso enkulu xa izinto zithatha ukujika. Umkhuhlane oqhubekayo owaqala ngo-1932 ukuphazamiseka kweentlango ezinkulu. Isiqhwithi esikhulu somthunzi, esibizwa ngokuba yi-Dust Bowl, sithatha indawo yommandla kude nomoya phakathi no-1930. Ingxaki yayiqhutyelwa ngokoqobo kwiinkqubo zeCongress, njengoko i-particle yomhlaba yambethe iWashington, DC ngo-1934.
Ngo-Apreli 27, ngo-1935, i-FDR isayine umthetho obeka iNkonzo yoLondolozo loMhlaba (SCS) njengenkqubo yeSebe lezoLimo lase-United States. Injongo ye-ejenti yayiyikufunda nokusombulula ingxaki yomhlaba ophazamisayo. I-SCS yenza uphenyo kwaye yavelisa izicwangciso zokulawula izikhukula ukukhusela umhlaba ukuba uhlambuluke. Baye baqulunqa amaziko ommandla ukuba bahlakulele kwaye basasaze imbewu kunye nezityalo zokusebenzela umhlaba.
Ngomnyaka we-1937, inkqubo yanda xa i-USDA ibhala uMthetho weZithili zoLondolozo lweNkundla yeNtshona Koloni. Kwixesha elidlulileyo, izithuba zeeNdawo zokuLondolozwa kweNxweme ezingama-3 000 zaqulunqwa ukuze zancedise abalimi ukuphuhlisa izicwangciso kunye nezenzo zokulondoloza umhlaba kumhlaba wabo.
Ngethuba lolawulo lukaClinton ngo-1994, iCongress yavuselela i-USDA kwaye yaqamba kwakhona iNkonzo yoLondolozo lweNhlabathi ukubonisa ububanzi bayo. Namhlanje, iNkonzo yoLondolozo lweNdalo (Natural Resources Conservation Service) (NRCS) igcina ii-ofisi zasensimini kulo lonke ilizwe, kunye nabasebenzi abaqeqeshwe ukunceda abanini-mhlaba basebenzise iindlela zokulondolozwa kwezesayensi.
Isithando esikhulu somlilo se-phosphate esetyenziselwa ukwenza i-phosphorus ebusayo kwi-TVA yitshizi yemichiza kufuphi ne-Muscle Shoals, iAla. I-Library yeCongress / i-Alfred T. Palmer
I-Tennessee Valley Authority inokuba yimpumelelo ebalulekileyo kumdlalo weNew Deal. Eyasungulwa ngoMeyi 18, 1933 yi-Tennessee Valley Authority Act, i-TVA yanikezelwa ngumsebenzi onzima kodwa obalulekileyo. Abemi beendawo ezihlwempuzekileyo, zasemaphandleni badinga kakhulu ukukhuliswa koqoqosho. Iinkampani zamandla ezizimeleyo zazingekho phantsi le nxalenye yelizwe, njengenzuzo encinane enokufunyanwa ngamafama ahluphekileyo kwi-grid yamandla.
I-TVA inikwe iiprojekthi eziliqela ezijoliswe kumlambo womlambo, owawuthetha oku sixhenxe. Ukongezelela ukuvelisa amandla ombane wamanzi kwindawo engapheliyo, i-TVA yakha amadamandla okulawula izikhukula, ivelise izityalo zezolimo, iindawo ezihlaziyiweyo zehlathi kunye neendawo zasendle zasendle, kunye namafama afundiswe ngokulawulwa komkhuhlane kunye nezinye iindlela zokuphucula imveliso yokutya. Kwiminyaka yokuqala yeshumi, i-TVA yaxhaswa yi-Civilian Conservation Corps, eyasungula iinkampu ezingaba ngu-200 kuloo ndawo.
Nangona iiprogram ezininzi zeNew Deal zaphela xa i-US ingena kwiMfazwe Yehlabathi II, i-Tennessee Valley Authority yadlala indima ebalulekileyo kwimpumelelo yezempi yelizwe. Izityalo ze-TVA ze-nitrate zivelise izinto eziyimveliso zeempahla. Isebe labo leemephu livelise iimephu ze-aircraft ezisetyenziswe ngabaphathi be-aviators ngexesha leemkhankaso eYurophu. Yaye xa urhulumente waseUnited States egqiba ukuphuhlisa iibhomu ze-atomic yokuqala, bakha idolophu yabo eyimfihlo eTennessee, apho babekwazi ukufikelela kwizigidi ze-kilowatts eziveliswe yi-TVA.
I-Tennessee Valley Authority inika amandla kunabantu abangaphezu kwezigidi ezili-9, kwaye ijongene nokudibanisa i-hydroelectric, i-charal-fired, kunye nezityalo zamandla enyukliya. Ihlala ingumxholo welifa elingapheliyo leNguqulelo entsha ye-FDR.
"Umthetho weBhanki ka-1933 (i-Glass-Steagall)," iwebhusayithi ye-Federal Reserve History. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
"I-FDIC: I-History of Trust and Stability," kuboniswe kwi-intanethi kwi-website ye-Federal Deposit Insurance Corporation. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
"Iindlela Zenkqubela: Imbali Yethu," iwebhusayithi yeW Fannie Mae. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
Imbali emfutshane kaFannie Mae kunye noFreddie Mac, "Kate Pickert, iwebhusayithi ye-Time yamaphephancwadi, ngoJulayi 14, 2008. Kufumaneka kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
"Imbali Yethu," kwiwebhusayithi yeBhodi yoBudlelwane beZebasebenzi yeSizwe Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
"Oko Senzayo," IWebhsayithi ye-Securities and Exchange Exchange website. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
Uxhasomali loNyaka lweNkcazo, u-2016, kwiwebhusayithi yoLawulo loKhuseleko loLuntu. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
Iminyaka Engaphezu Kwama-80 Ukunceda Abantu Bawuncede Umhlaba: Imbali emfutshane ye-NRCS, i-website ye-USDA ye-Natural Resources Conservation Service. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
"I-TVA iya kwiMfazwe," kwiwebhusayithi yeTallsee Valley Authority. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
I-website entsha yokuphila. Kufikeleleke kwi-intanethi ngo-Oktobha 27, 2017.
Ukuvulwa kokuqala kukaGeorge Washington
'I-Stranger' yi-Quotes kaAlbert Camus
10 Ukuzinikezela okuSebenzayo kumadoda
Unokuzipholisa Igumbi Ngokuvula iFriji?
Amanyathelo okuphumelela kwiNtsapho yaseNtlanganisweni
IBering Strait kunye neBring Bridge eBrad
Isishwankathelo seNcwadi, amanqaku, kunye neNkcazelo yoFundo yeFrankenstein